Olona marobe maty, naratra tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro Islamista Wina
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Olona marobe maty, naratra tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro Islamista Wina
Novambra 2, 2020
Olona maromaro no nanao fanafihana mpampihorohoro tany afovoan'i Wina ny alatsinainy teo, izay nahafatesana olona marobe ary olona maro no naratra, hoy ny tatitry ny polisin'i Wina androany.
“Voatifitra ny poa-basy tany amin'ny distrikan'ny Inner City - misy olona maratra - MITANDREMA lavitra ny toerana rehetra na ny fitateram-bahoaka”, hoy ny nosoratan'ny polisy tao amin'ny Twitter, nangataka tamin'ny olona tsy hizara sary na horonan-tsary.
Nokendren'ireo mpanafika ny faritra manodidina ny Stadttempel, sinagoga jiosy Vienna nanomboka tamin'ny 1820, ny alatsinainy hariva. Tsy fantatra mazava na kendrena ny sinagoga tenany na ireo biraom-pokontany mifanila aminy, satria nakatona izy ireo tamin'izany fotoana izany.
Vondron-tafika lehibe lehibe no niasa tao amin'ilay toerana. Ny Kronen Zeitung any Austria dia nitatitra fa nisy mpanao fanafihana nanapoaka ny tenany tamin'ny alàlan'ny fitaovana fanapoahana.
Ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia nitatitra fa maty marobe, isan'izany ny polisy iray izay naratra tamin'ny ady basy niaraka tamin'ireo mpanafika. Misy tatitra tsy voamarina momba olona fito maty.
Ny horonantsary niparitaka tamin'ny media sosialy dia nampiseho lehilahy mitam-basy mitafy fotsy mandehandeha amin'ny arabe feno rakotra vato ary fitifirana. Sarimihetsika bebe kokoa dia nampiseho fifanakalozana afo tao Schwedenplatz, kianja akaikin'ny Renirano Danube.
Andro vitsy monja taorian'ny nilazan'ny Chancellor Austrianianina Sebastian Kurz fa hiady amin'ny “Silamo politika” ny governemanta, ho setrin'ny vondrona tanora Tiorka 30-50 nanafika ny fiangonana katolika an'i St. Anton von Padua, nihiaka hoe “Allahu akbar.”
Tany Frantsa, olona telo no notafihana tamin-kabibiana tao amin'ny katedraly iray tao Nice tamin'ny herinandro lasa teo, taorian'ny fanambarana nitovizan'ny filoha Emmanuel Macron momba ny "Islamisma" mandrahona ny repoblika frantsay laika. Roa herinandro lasa izay, nisy mpampianatra frantsay notapahin-doha tany ambanivohitra avaratry Paris taorian'ny lesona azony momba ny fahalalahana miteny.
Islandy, Arzantina, Tiorka ary Caicos, Kazakhstan ary Kolombia dia mandray ny fitomboka voalohany amin'ny fiarovana sy ny fahadiovana manerantany
Alliance Air Manendry ny Tale Jeneralin'ny Vehivavy Voalohany